पर्यटनको सम्भावनाकाे मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेशकाे बजेट अाएन - Tourism News Portal of Nepal
पर्यटनको सम्भावनाकाे मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेशकाे बजेट अाएन
“पञ्चायतकालमा दरबारले सबै अधिकार र स्रोतसाधनमाथि कब्जा गरेर विकासको ढोल पिटेको थियो। त्यसैगरी सबै अधिकार केन्द्र सरकारमातहत राखेर ओली सरकारले त्यही पञ्चायती शैली देखाएको छ।”
सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस नयाँ होइन। सुर्खेतदेखि मुगु जोड्ने कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति पनि नयाँ विषय थिएन। यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने योजना थियो। कर्णालीका दुर्गम जिल्लालाई विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने योजना अघिल्लो सरकारकै थियो। सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन गर्ने तथा भेरी करिडोरको स्तरोन्नति आदि कार्यक्रमले कर्णालीका विपन्न नागरिकमा प्राण भर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। खाली खुट्टा हिँडेर स्कुल जाने बालबालिकालाई राज्यले दिनुपर्ने के हो ? गर्नुपर्ने के हो ? दायित्व के हो ? यो सरकारले बुझेन वा बुझ्न चाहेन। भौतिक पूर्वाधारका लागि प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने विषयमा बहस मात्रै भयो, तर सम्बोधन भएन। पर्यटनलाई कर्णालीको समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सकिने थियो। आम्दानीको स्रोत रहेको र बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन नै गरेन।